Soo-helitaanka metelaha metelaha NASA ee Mars ayaa noqday mid aad u xiiso badan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Soo saarida metelaha metelaha NASA ee Mars ayaa noqotay mid aad u xiiso badan - BGR
Soo saarida metelaha metelaha NASA ee Mars ayaa noqotay mid aad u xiiso badan - BGR
soo laabtay dhamaadka bisha Juun NASA ayaa shaaca ka qaaday in dareemayaasha taleefannadooda gacanta ee Curiosity ay u soo direen heerar naxdin leh oo ah methane oo umuuqda inaysan ka soo bixin meelna. Go'aaminta isha methane-ka iyo in hanaankeeda ay tahay mid juqraafi ama mid bayooloji - hadda waa aag weyn oo cilmi baaris ah. Daraasad cusub oo ay sameysay Jaamacadda Newcastle ma bixiso jawaab macno leh, laakiin waxay noo soo dhoweyneysaa tallaabo tijaabin ah.
In maqaal lagu daabacay Warbixinno cilmi ah Baarayaasha runtii waxay meesha ka saaraan il suurto gal ah. methane, kuna dooday in, oo ku saleysan indho indhaynta nabaad-guurka hawada ee Mars, uma badna inay ka timaado burburka dhagaxa iyo hawada gaaska lagu sii daayo.
Isbeddelada heerarkii hore ee methane-ka hawada ee Mars ayaa la ogaadey in muddo ah, mana jiro qof si dhab ah u yaqaan waxa mas'uul ka ah. Methane waxaa lagu abuuri karaa nolosha microbial, laakiin sidoo kale waxaa jira habab juqraafi - sida methane ay sii daayaan dhagaxa markii ay dabayshu jabto - taasi waxay noqon kartaa isha.
Marka si fudud loo eego, methane on Mars ma ahan qoriga qiiqa ee nolosha ay kujirto (ama waligeed jirtay) meeraha, sidaa darteed saynisyahannadu waxay isku dayayaan inay yareeyaan suurtagalnimada. Daraasaddan cusub, cilmi-baarayaashu waxay caddeeyeen heerka nabaad-guurka ee Mars waxayna isku dayeen inay isbarbar dhigaan isbeddelada xilliyeed ee heerarka methane-ka asalka.
Markay tixgeliyeen wax walba, ma aysan soo saari karin xog adag. isku xirka u dhexeeya nabaad-guurka hawada iyo geedaha methane, taas oo macnaheedu yahay inay u badan tahay inuu ka yimid meel kale. Bixinta nabaad-guurka dabaysha ayaa la macno ah inay jirto il-biyoolaga suurtagalka ah ee methane-ka yar, laakiin tani ma muujineyso in methane ay ka dhalatay ilaha cilmiga bayoolajiga.
Had iyo jeer waa su’aal furan. Maqaalkayagu wuxuu matalaa qayb yar oo ka mid ah sheeko aad u weyn, "ayuu yidhi Dr. Emmal Safi, oo ah maamulaha buugga, Bayaan . Ugu dambayntii, waxaan isku dayeynaa inaan go’aansanno bal inay suurtagal tahay in noloshu ku sii jirto meerayaasha aan ahayn kuwa aan ahayn, kuwa nool hadda ama laga yaabee waayihii hore, kuwaas oo hadda loo ilaaliyay inay yihiin fossils ama saxeex kiimiko.
Isha Muuqaalka: NASA / JPL-Caltech / MSSS
Odaygu wuxuu ku duulayaa gurigiisa, wuxuu u baxaa "sida Kool-Aid Man" markii booliisku yimaado - BGR